Mukati wekugadzirwa kwemaimba ekare Interior design villas prices Constanta Bucharest - Nobili Interior design, studio, architect, designer, companies, design, prices
mukati mukati mekugadzirwa kwekugadzirwa kwematengo	interior design companies in bucuresti	classic home style design	interior design classic modern price	classic pfuma yepamusoro pamba	mukati mukati mekugadzirwa kwepamusoro imba yakanaka	mukati mekugadzira 3d	mazuva ano classical interior design	dzimba dzemukati nekunze	imba uye mukati mekugadzirwa	mukati uye kunze kweimba purojekiti	mukati mekugadzira	luxury interior design prices	interior design galati prices	mukati mekumisika makambani anorovera mitengo	mukati mekugadzira makambani brasov mutengo	mukati mukati mekambani makambani prahova
Projects hwedu Portfolio 3D mukati magadzirirwo misha, dzimba, Apartments anoitwa mune chaiwo werudzii, eclectic, ano kana Mediterranean akaita zvose pamusoro nyika. Tinopa turnkey mukati dzimba zvingangoita chokuendesa zvinhu zvose akanyorwa mukati kugadzira muzvirongwa.
1 peji mu 4
Kutevera kugona kwechirevo che mukati mekugadzira pamwe nekambani yedu tinopa vashandi vedu mukana wekutenga zvinhu zvakakodzera zvekugadzirwa kwemukati. Akabata pamusoro nzvimbo kubva 2008, kambani yedu unyanzvi ari kugadzira uye mukati magadzirirwo ane Portfolio muzvirongwa nokuti mukati zvapedza zvose dzinogarwa uye dzimba chaiwo ano dzokugara muna Galati, Braila, Tulcea, Calarasi, Craiova, Giurgiu, Buzau, Bacau, Iasi, Suceava, uyewo yezvokutengeserana Real Estate (hotel, hostel, Salon zviitiko, maresitorendi, nembariro, cafes, runako Salon runako muzvitoro) muna Constanta, muBucharest, Brasov, Ploiesti, Prahova. Nyanzvi dzedu mukati mekugadzirwa kwemukati dzinoenderana nemhando imwe neimwe inoda, uye zvichienderana nesangano rakagadziriswa, sarudza ceramic tiles uye yekugeza faience uye kicheni, chipinda chekugara uye chivako chikafu, kurongedza rusvingo, zvigadzirwa uye kugadzirisa, zvigadziri zvemwenje uye zvimwe zvakagadzirisa zvinhu. Chikoro chandeliers kana mazuva ano mashizha anogona kushandiswa nenzira inofadza mukati meimba mukati mekugadzirwa kwemukati. Sarudza zvinhu zvinotapira kubva kumichina yakakurumbira muItaly, kuGermany, kuSpain pamitengo yemhizha pamwe chete nenyanzvi kubva Nobili Interior Design ndiani achakupa mazano mazano kune chimwe nechimwe chinhu.
Portfolio mishonga yechikwata mukati mukati meimba dzimba .